Dhuunta madow ee aynu ku socono. | Doodwadaag waa Danwadaag.
Dhuunta madow ee aynu ku socono.
Waan welwelayaa, wax welwelka iga bi’iyana ma hayo. Waxa aan ka walwalayo ma ahan naftayda, ubadkayga iyo reerkayaga ee waa aayaha ummad, waa ummadda ku nool dhulka loo yaqaan Jamhuuriyadda Soomaaliya, haddase jiritaankeedu shaki weyn galay. Waxaa ii muuqda mustaqbal midabo badan. Waa mustaqbal qof walba garaadkiisa ku soo dhaweynayo. Qofka ku mashquulsan guusha aan bilow iyo dhammaad toona lahayn ee uu la jecelyahay tolkiis iyo deegaankiisa xaaladdiisa wax iska beddeli maayaan illaa uu ka geeriyoodo amaba isaga iyo tolkiis ka mid noqdaan taariikh laga sheekeeyo. Qofka ku mashquulsan dahab iyo doollar aruursiga iyo daaro dhisidda ee aan is weydiin yaad u dhisaysaa, muxuuse maalkan ku tarayaa isna kaa hore waxba kama sokeeyo. Qofka ku mashquulsan shirar iyo taageeridda dawlad aan meelna ka shaqayn ee aan is weydiin maxaa xigi doona maalin heblaayo ogow laf cad buu toobin ku hayaaye.
Welwelka i haya waa mid aanan weli jawaab u helin ee haddaad igu dhaantid fadlan jawaab iga sii. Haddaan hadalka kuu saafo waxa aan ka walwalayaa waa sharciyadda jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed haddase lagu kordhiyey xarafka Federaal. Anoon taariikhda laga wada dheregsan yahay aad ugu fogaan bal aan isla eegno dhanka shirciyadda. Jamhuuriyaddu waxay ka kooban tahay labadii gobol ee midoobay 1da Luulyo 1960kii. Waxaa dabar u ahaa ee isku hayey labadaa gobol waa dastuurkii loo codeeyey 1961kii. Dastuurkaasi waxa uu aas aas u ahaa jamhuuriyaddii koobaad iyo tii labaad, hal mar ayaana dib u eegid lagu sameeyey. Nasiib darro waxaa 1991kii meesha ka baxay dawladdii dhexe ee ilaalinaysay dastuurka, dalkiina waxa uu galay fawdo.
Dawladihii ku meel gaarka ahaa waxay ku shaqaynayeen axdi ku meel gaar ah, waxase bed qabay dastuurka. Maantase waxaynu dhexda kaga jirnaa xaalad aan caddayn. Dastuurkii waxaa lagu beddelay mid ku meel gaar ah. Waxaa la sheegay in dawladdu rasmi tahay laakiin waxaa mugdi weyn ku jiraa sharciyadda dawladda iyo dastuurkaba marka la gaaro bisha Agoosto 2016ka. Waayo si dastuurku u jiro waa in hay’adihii ilaalin lahaa ay shaqaynayaan, hay’adahaas oo uu ugu horreeyo baarlamaanka. Baarlamaanku sharciyaddiisa wuu luminayaa waayo habkii lagu soo xulay waxaa u saamaxayey shuruucdii dalka ee markaa lagu shaqaynayey. Shuruucdaas waa laga guuray oo dib looguma laaban karo. Doorasho cod madax bannaan oo ka hirgeli karta 2016ka dhammaan dhulkii la isku dhihi jirey Jamhuuriyadda Soomaaliyana suurta gal ma ahan oo taas waaqica ayaa ina baraya. Waa hal xiraale isa suran ah oon xal loo hayn!
Xilligii fawdada weji ka duwan ayaynu ku jirnaa. Waxaa maanta Soomaaliya ciiddeeda ka hawl gala ugu yaraan konton kun oo shisheeye ah, waa marka la isu geeyo ciidamada muuqda iyo shaqalaha kale. Waxaa firfircooni saa’id ah ka muuqataa beesha caalamka labadii sano ee ugu dambaysay, shakina kuma jiro in waxyaabo badan horumar laga gaaray balse su’aasha taagan ayaa ah waa maxay qorshaha ay ugu talo galeen Soomaaliya Agoosto 2016ka ka dib haddii uu soo af jarmi waayo loolanka qabaa’ilada?Ma waxay dalka dib ugu celinayaan ku meelgaarkii oo mar kale ayay dib ugu bilaabi doonaan madadaaladii dib u heshiisiinta? Ma waxay abuuri doonaan dhawr dawladood oo kala madax bannaan? Ma waxay ku kala dari doonaan waddamada deriska? Mise waxay tirtiri doonaan madaxbannaanida Jamhuuriyadda oo waxay u dhiibi doonaan Qaramada midoobay?
Yaraantaydii waxaa la igu soo barbaariyey dareen waddaniyadeed waxaana taariikhda la iigu dhigay in soomaalidii hore wacyigoodu hooseeyey oo ayan aqoon qiimaha qaranimo, gumaysigana ayan fikradba ka haysanin. Sidaa darteedna gumaystayaashii reer Yurub iyo xabashiduba si fudud ayay dadka iyo dalkaba ula wareegeen. Haddaan goob joog noqdo calanka buluuga ah oo la dejiyey, qaramada midoobayna loo dhiibay maxaan ubadkayga ugu sheekayn? Gobtii qarniga 21aad gunnimada dooratay? Doodihii madhalayska ahaa ee aynu rubac qarniga wadney maxay inoo tareen? Waxaase iigase welwel badan haddii dhuuntaa madow la galo sidee ilays lagu arki?
kala xiriir qoraaga: burhaanali990@gmail.com